IBlackBox: Ukuphathwa Kobungozi bama-ESPs Ukulwa Nogaxekile | Martech Zone
I-BlackBox izichaza njengesizinda semininingwane esihlanganisiwe, esivuselelwa njalo se- cishe onke amakheli e-imeyili athengwa futhi athengiswe ngenkuthalo emakethe evulekile. Isetshenziswa kuphela ngu Abahlinzeki Besevisi Ye-imeyili (ESPs), ukuze unqume kusengaphambili ukuthi ngabe uhlu lomthumeli lusekelwe kwimvume, luyi-spammy, noma luyingozi ngokweqile.
Eziningi zezinkinga abahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili abahlangabezana nazo ngogaxekile be-fly-by-night abathenga uhlu olukhulu, balungenise kungxenyekazi yabo, bese beluthumela kulo bazi ukuthi abanayo imvume. Bayazi ukuthi ukuthumela ohlwini kuzoveza izikhalazo eziningi futhi mhlawumbe kuzobakhipha emsamo we-imeyili - kepha bakhona nje ukukhipha leyo imeyili yokuqala. Ukugaxekile uhlu akumayelana nokwakha ubudlelwano!
Inkinga ngalokhu ukuthi abahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili banedumela kubahlinzeki bezinsizakalo ze-inthanethi (ISPs). Uma ama-ISPs abona isilinganiso esikhulu sesikhalazo esivela kwenye yamaseva we-imeyili, azoba vimba yonke i-imeyili ivela kuleyo seva! Lokho kusho ukuthi wonke amaklayenti athumela i-imeyili avela kuleyo seva athintekile… okungaba nguwe!
Kusetshenziswa insizakalo efana ne- I-BlackBox ngokukhalipha, ngiyaqiniseka ukuthi umthumeli angabikezela ubungozi obuhambisana neklayenti elisha elizofika. Ama-ESP kufanele aqaphele, noma kunjalo. Ngangine-ESP ake yangitshela ukuthi uhlu lwami selwedlule umkhawulo futhi kwakumele ngiphikisane nabo. Noma bengingaluthenganga uhlu, bekukhona amakheli e-imeyili anele kuhlu lwami afane nolunye lwalezi zinqolobane engimakwe ngalo njengogaxekile - NGAPHEZU kweqiniso lokuthi nganginemvume futhi ngangikuthumela iminyaka. Ekugcineni bahlehla, ngathumela ohlwini lwami futhi isilinganiso sami sezikhalazo sasingu-0%.
Khumbula, lokhu akuyona i-database yamakheli e-imeyili angenakulethwa, futhi akulona uhlu lwamakheli e-imeyili ngokusobala angenayo imvume. Amakheli e-imeyili ajwayelekile wathenga wathengisa ngezinsizakalo zohlu lwe-imeyili. Nginesiqiniseko sokuthi ikheli lami le-imeyili likuBlackbox… kepha empeleni ngiyabhalisela emakhulwini ezincwadi zezindaba.
Le yisevisi ebalulekile kunoma iyiphi i-ESP enezinkinga ngogaxekile abonakalisa idumela labo!
Tags: ibhokisi elimnyamauhlu lwabantu abamnyamaikheli le-imeyiliikheli le-imeyili lobuhlakaniuhlu lokuvimbela i-imeyiliukukhishwa kwe-imeyiliidumela le-imeyiliukuhlolwa kobungozi be-imeyiliukuphathwa kwezinhlekelele nge-imeyiliumhlinzeki wesevisi ye-imeyili